How'd it happen and more reports?: တရုတ်နိုင်ငံ၏စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး " လေးခုကုမ္ပဏီများ "ဘယ်လိုတိုက်ခိုက် နေကျလဲ?
တရုတ်နိုင်ငံ၏စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး " လေးခုကုမ္ပဏီများ "ဘယ်လိုတိုက်ခိုက် နေကျလဲ?
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက Apple (+ 0.86% aapl) နှင့် Samsung (ssnlf + 4.00%) ဈေးကွက်၏အကြောင်းတတိယအဘို့အစာရင်းကိုင်, ဈေးကိုအဆမတန်မြှစမတ်ဖုန်းရောင်းအားလွှမ်းမိုး။ ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်စာရင်းတွင်လာမည့်အများအပြားအမည်များကိုစုပေါင်းကြီးနှစ်ခုအဖြစ်နီးပါးအဖြစ်အများအပြားဟန်းဆက်များရောင်းချကြောင်းလေးနိမ့်တန်ဖိုးနည်းတရုတ်ပြိုင်ဖက်များပါဝင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်မှာတော့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး, လေးခုကုမ္ပဏီများမှနီးကပ်စွာအရေအတွက်ကို-One အစက်အပြောက်မှာအလှည့်ယူပြီး, နောက်ဆုံးသောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြိုင်ဘက်ကိုက်ညီပြီ။ ဆောက်လုပ်ဖို့ပိုက်ဆံလိပ်ခေါင်းဆုံးရှုံးဖို့ဆန္ဒရှိအသစ်ကပြိုင်ဘက်အမြဲရှိပါတယ်အဖြစ် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဇယားအတွက်ကိန်းဂဏန်းများသုတေသနကုမ္ပဏီ IDC မှမှတဆင့်, 2016 ၏တတိယသုံးလပတ်ကနေဖြစ်ကြသည်။ ) တရုတ်နိုင်ငံတွင်ခံနံပါတ် 1, သို့သော်, သေချာပေါက်အလွန်အမြတ်အစွန်းမဟုတ်ပါဘူး ဈေးကွက်ပမာဏ။
မကြာသေးမီနှစ်များတွင် Huawei ကကမ္ဘာ့နံပါတ်3စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်သိသိသာသာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြေရာနှင့်အတူပထမဦးဆုံးတရုတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာ, အထုပ်ထဲကကြိုးပဲ့သိရသည်။ သစ် တစ်ခုအင်္ဂ࿿ါရပ်ဆောင်းပါးမှာတော့ Fortune မဂ္ဂဇင်း အတွေ့အကြုံ Huawei ၏ဆယ်စုနှစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပစ္စည်းကိရိယာများအောင်နှင့်ရောင်းချနေပုံကိုပြသပါကပိုမိုကောင်းမွန်ဖုန်းများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု-တိုးမြှင်င်း၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုနှ ၄င်း၏အမြတ်အစွန်း၏ထင်ရှားခြွင်းချက်
Fortune မဂ္ဂဇင်းက Apple နှင့် Samsung တကမ္ဘာလုံးဖမ်း ၄င်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကို Handicap မှ Huawei ၏အားသာချက်များနှင့်၎င်း၏အတားအဆီးကြည့်ပါတယ်။
ဤတွင် Huawei နှင့်၎င်း၏အဓိက တရုတ်ပြိုင်ဖက်တစ်ဦးအမြန်အကွက်တွင်လမ်းညွှန်ပါတယ်။
ဘီလျံနာ Duane Yong Ping ကပိုင်ဆိုင် Oppo, ကျေးလက်ဒေသတရုတ် (က 200,000 လက်လီနေရာများတွင်ရှိပြီးဘယ်မှာ) နှင့်အရှေ့တောင်အာရှရှိဈေးသက်သာဖုန်းများရောင်းချゞင်း၏အမည်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ゞင်း၏ R9S တရုတ်အနေနဲ့ iPhone ကို 7-တစ်အနိုင်ရပုံသေနည်းတစ်ခုအတိအကျကိုမိတ္တူနဲ့တူလှပါတယ်။
ထို့အပြင် Duane ကပိုင်ဆိုင် Oppo ရဲ့အစ်မအမှတ်တံဆိပ် Vivo, များအတွက်ဈေးကွက်ကゞင်း၏စမတ်ဖုန်းများ '' ကင်မရာ, selfie-အစွဲအလမ်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်အဓိကရောင်းပွိုင့်အပေါ်အလေးပေး။ celebrity ထောက်ခံချက်နှင့်တရုတ်တို့အတွက် NBA ゞင်း၏စပွန်ဆာအမှတ်တံဆိပ် propelled ပါပြီ။
အဆိုပါကွန်ရက်ပစ္စည်းကိရိယာများကုမ္ပဏီကြီး 2016 ခုနှစ်တွင်ဖုန်းများတစ်ခုခန့်မှန်းခြေ $ 26.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိကိုရောင်း, ဒါမှမဟုတ် 140 သန်းဟန်းဆက်။ ဒါဟာအဘယ်သူ၏ထုတ်ကုန်ယေဘုယျအားဖြင့်ဥရောပတိုက်တွင်ယင်း၏ခိုင်မာတဲ့မကြာသေးမီတိုးတက်မှုနှုန်းကိုရှင်းပြကူညီပေးသည်ဖြစ်သောအရည်အသွေးပြည့်-in ကို Samsung ရဲ့နဲ့အတူတန်းတူဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်ကိုသာတရုတ် phonemaker ပါပဲ။
Huawei ကအပေါ်ကိုပိုမိုအဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂ࿿ါရပ်ကိုဖတ်ပြီး "Huawei က Apple နှင့် Samsung ဖမ်းနိုင်သလား?"
Xiaomi ၏ဖုန်းများကို 2014 ခုနှစ်တွင် အပေါင်းတို့သဒေါသ, သာမန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်လက်လီဖြန့်ဖြူးနေတဲ့မရှိခြင်းအားဖြင့်ထိခိုက်စေနီးပါးအဖြစ်လျင်မြန်စွာသူတို့ hits ဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်မျက်နှာသာထဲကကျသွားကြသည်။ အဆိုပါယခင်ကအွန်လိုင်း-ရောင်းအားသာကုမ္ပဏီလက်လီစတိုးဆိုင်များဖွင့်ရန်ကြီးမားသောတွန်းအားအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါး၏တစ်ဦးကဗားရှင်းအမည်ရသည့်အင်္ဂ࿿ါရပ်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ 1, 2017 ခုနှစ် Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ပြဿနာပေါ်လာသော "ဟွာဝေးများအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ Big လုံလောက်ပါတယ်။ "
Posted by Ko Nge at Sunday, July 16, 2017
Labels: စီးပွားရေး, ဈေးကွက်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေ နှင့် အ...
Myanmar Economic Monitor, December 2016
၀င်ငွေခွန်နည်းဥပဒေများ.. ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘဏ္ဍဍာနှစ်
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍဍဍာရေးနှစ် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအ...
ကုမ္နဏီနှင့် စတော့ရှယ်ယာ The Stock and Corporatio...
Capital Markets and Capitalism ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုေ...
အထည်တွေကို သဘာဝထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ဆေးစိုးပန်းရိုက်တာတေ...
Xiaomi က Q2 2016 ခုနှစ်တွင် $ 40 ဘီလီယံ၏ရုတ်တရက်အရ...
ကမ္ဘာ့ 4th အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ - Xiaomi က ...
Cosmetics အလှကုန်တွေကို Fridge ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထာ...